दर्दनाक अवस्थामा भेटिएका एकैघरका चारजना अपाङ्ग छोराछोरीहरुलाई सहयोग गर्नु हुदै माता सविता सरू… (तस्विर सहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > दर्दनाक अवस्थामा भेटिएका एकैघरका चारजना अपाङ्ग छोराछोरीहरुलाई सहयोग गर्नु हुदै माता सविता सरू… (तस्विर सहित)
आज ठिक १२ बजे सुनसरी ईटहरीको डम्फु चौकमा यस्तो दर्दनाक अवस्थामा भेटिएका एकैघरका चारजना छोराछोरीहरु अपाङ्ग छन् । यो दृष्य ऊहाहरुको नैँ हो र एकजना ऊभिने ऊहॉको आमा हो र मैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत ख़र्चमॉ सकेको सहयोग चॉमल ७५ केजी र ब्लैंकेटहरु चारवटा सहयोग गर्दैछु । हजुरहरुको पनि सहयोगको अपील गर्दै कसैको दुःख सिधै हेरेर बस्न नसक्ने मेरो मन सदैब अपाङ्गहरुको सेवामॉ लिप्त हुनेछु र सेवा गरीरहने छु ।
हजुरहरुले पनि सकेको सेवा तथा सहयोग गरौँ भन्ने तपॉईहरुमॉझ सॉनो जॉनकार गरॉऊदछु । सबैमॉ भगवॉनले कल्याण गर्र्नुहोस् र मनबाट सफा हृदयबाट खुल्ला मनबाट खुशी भएर सहयोग गरौँ र मन पवित्र भएपछि मॉत्र पक्का सहयोग गर्न सक्छौँ र सहयोग गर्न पनि आत्माबाटै मन हुनुपर्छ । मैले पनि दर्जनौँ ठॉऊमॉ सहयोग गरिसकेकि छु र गरिरहने नैँ छु । भगवॉनले अझै शक्ति प्रदॉन गर्नुहुनेछ जयहोस् सम्पुर्णमा ! मेरो पव्लिक नम्बर :-९८४२२१७१६२ मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ!
माता सविता सरू शर्मा आचार्यको फेसबुकबाट ।
दशैको मुखमा ठुलो दुखद खबर, नुवाकोटबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रुबाहक बस दुर्घटना…४४ यात्रु
कृष्ण ओलीलाई अमेरिका बाट ८५ लाख सहयोग – पुरा हेर्नुहोस तस्विर सहित